Vaovao - Te hanindrona RFID microchips RFID Tag amin'ny biby fiompinao ve ianao?
Tag enta-mavesatra/Hang Tag
Te hanindrona RFID microchips RFID Tag amin'ny biby fiompinao ve ianao?
Lahatsoratra momba ny indostria
Vao haingana, namoaka fitsipika i Japana: manomboka amin'ny Jona 2022, ny fivarotana biby fiompy dia tsy maintsy mametraka puce microelectronic ho an'ny biby fiompy amidy. Teo aloha dia nitaky saka sy alika avy any ivelany hampiasa microchips i Japana. Efa tamin'ny volana oktobra lasa teo, Shenzhen, Shina, dia nampihatra ny "Fitsipika Shenzhen momba ny fametrahana marika elektronika ho an'ny alika (fitsapana)", ary ny alika rehetra tsy misy implant puce dia ho raisina ho alika tsy nahazoana alalana. Tamin'ny faran'ny taona lasa, Shenzhen dia nahatratra ny fandrakofana feno momba ny fitantanana chip rfid alika.
Tantaran'ny fampiharana sy ny sata misy ankehitriny amin'ny poti-fitaovana biby fiompy. Raha ny marina, ny fampiasana microchips amin'ny biby dia tsy mahazatra. Ny fiompiana dia mampiasa azy io handrakitra ny mombamomba ny biby. Ny zoologists dia mametraka microchips amin'ny bibidia toy ny trondro sy vorona ho an'ny tanjona siantifika. Ny fikarohana, ary ny fametrahana azy amin'ny biby fiompy dia afaka manakana ny biby tsy ho very. Amin'izao fotoana izao, ny firenena eran'izao tontolo izao dia manana fenitra tsy mitovy amin'ny fampiasana RFID biby fiompy microchips tag: Nametraka tamin'ny 1999 i Frantsa fa tsy maintsy tsindrona microchips ny alika efa-bolana mahery, ary amin'ny taona 2019 dia tsy maintsy atao koa ny fampiasana microchips ho an'ny saka; Notakian'i Nouvelle Zélande ny hambolena alika biby fiompy tamin'ny 2006. Tamin'ny Aprily 2016, ny Fanjakana Royaume-Uni dia nitaky ny hampidirana microchips ny alika rehetra; Nampihatra ny Lalàna momba ny andraikitry ny biby fiompy i Chile tamin'ny taona 2019, ary saka sy alika biby efa ho iray tapitrisa no nambolena tamin'ny microchips.
Teknolojia RFID mitovy habe amin'ny voam-bary
Ny chip rfid biby fiompy dia tsy karazan-javatra toy ny ravin-taratasy maranitra izay heverin'ny ankamaroan'ny olona (araka ny aseho amin'ny sary 1), fa endrika cylindrical mitovy amin'ny vary varimbazaha lava, izay mety ho kely toy ny 2 mm ny savaivony ary 10. mm ny halavany (araka ny aseho amin'ny sary 2). . Ity puce kely "vary" ity dia marika mampiasa RFID (Radio Frequency Identification Technology), ary ny fampahalalana ao anatiny dia azo vakiana amin'ny alalan'ny "mpamaky" manokana (sary 3).
Amin'ny ankapobeny, rehefa apetraka ny puce, ny kaody ID voarakitra ao ary ny mombamomba ny mpiompy dia hafatotra ary hotehirizina ao amin'ny tranokalan'ny hopitaly biby na fikambanana mpamonjy voina. Rehefa zatra mahatsapa ilay biby mitondra ny puce ny mpamaky, dia vakio izy.
Mbola misy toerana malalaka ho an'ny fampandrosoana eo amin'ny tsenan'ny puce pet
Araka ny voalazan'ny "Taratasy Fotsy Indostria Pet 2020", dia nihoatra ny 100 tapitrisa ny isan'ny alika sy saka biby fiompy any an-tanàn-dehibe any Shina tamin'ny taon-dasa, nahatratra 10,84 tapitrisa. Miaraka amin'ny fisondrotan'ny fidiram-bolan'ny tsirairay sy ny fitomboan'ny filàna ara-pihetseham-pon'ny tanora, dia tombanana fa amin'ny taona 2024 dia hanana saka sy alika 248 tapitrisa i Shina.
Ny orinasa mpanolo-tsaina momba ny tsena Frost & Sullivan dia nitatitra fa tamin'ny taona 2019 dia nisy marika biby RFID 50 tapitrisa, ka ny 15 tapitrisa dia RFID marika fantsona fitaratra, Kavim-boromailala 3 tapitrisa, ary ny ambiny dia kavin-tsofina. Tamin'ny taona 2019, nahatratra 207.1 tapitrisa yuan ny haben'ny tsenan'ny marika biby RFID, izay mitentina 10.9% amin'ny tsenan'ny RFID ambany.
Ny fametrahana microchips amin'ny biby fiompy dia sady tsy maharary no tsy lafo
Ny fomba implantation microchip biby dia tsindrona subcutaneous, matetika eo amin'ny lamosina ambony amin'ny tendany, izay tsy mivoatra ny nerveuses, tsy ilaina ny fanatoranana, ary ny saka sy ny alika dia tsy hanaintaina be. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny tompon'ny biby dia hisafidy ny hanadio ny biby fiompiny. Atsindrona ny puce amin'ny biby fiompy miaraka, mba tsy hahatsapa na inona na inona amin'ny fanjaitra ilay biby.
Ao amin'ny dingan'ny implantation ny biby fiompy chip, na dia lehibe be ny fanjaitra syringe, ny dingana siliconization dia mifandray amin'ny vokatra ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana sy ny laboratoara, izay mety hampihena ny fanoherana sy hanamora ny tsindrona. Raha ny marina, ny voka-dratsin'ny fametrahana microchips amin'ny biby fiompy dia mety ho fandehanan-dra vonjimaika sy fahapotehan'ny volo.
Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny implantation microchip biby an-trano dia ao anatin'ny 200 yuan. Ny fiainan'ny serivisy dia maharitra 20 taona, izany hoe, amin'ny toe-javatra mahazatra, ny biby fiompy dia mila mametraka ny chip indray mandeha eo amin'ny fiainany.
Ankoatra izany, ny microchip biby fiompy dia tsy manana toerana toerana, fa mitana anjara toerana fotsiny amin'ny firaketana ny vaovao, izay mety hampitombo ny mety hahitana saka na alika very. Raha ilaina ny fampandehanana toerana, dia azo raisina ny vozon'ny GPS. Fa na mandeha saka na alika, ny tady no tady.
Fotoana fandefasana: Jan-06-2022